चेक बाउन्स भए समाधान गर्न के गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
चेक बाउन्स भए समाधान गर्न के गर्ने ?
चेक बाउन्स भए के गर्ने त
अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चेक बाउन्स भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समयसमयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो निर्देशनले फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कार्यालयको नाममा खिचिएका भुक्तानीका लागि जारी भएका चेकहरू अनिवार्य रूपमा एकाउण्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खिचेका चेकहरूको अग्रभागको खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर लगाउन पनि राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो निर्देशनमा उल्लेख छ । सो निर्देशनले चेकमा लेखिएको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परे अक्षरलाई मान्यता दिन सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चेकको अग्रभागमा अन्य संस्थाको क्रस छाप वा कुनै पनि छाप लगाउन नपाइने, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सको इमेज प्राप्त हुने भएकाले त्यसका पछाडि कालो रङमा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
बैकिग खबर बाट साभार
ट्याग्स: bounce ed check